आज पनि घट्यो सुन चाँदीको मूल्य ! यस्तो छ बजार भाउ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आज पनि घट्यो सुन चाँदीको मूल्य ! यस्तो छ बजार भाउ
आज पनि घट्यो सुन चाँदीको मूल्य ! यस्तो छ बजार भाउ
नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज बुधबार सुन तोलाको ७५ हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार मंगलबारको तुलनामा आज सुन २ सय रुपैयांले घटेको हो ।
तेजावी सुन तोलामा ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । आज चाँदी तोलाको ८७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी ५ रुपैयांमा घटेको हो ।
कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले यस वर्षको शिवरात्रिमा पासको व्यवस्था नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पशुपतिको भित्री सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। मन्दिर दर्शनका लागि जुन ढोकाबाट प्रवेश गर्छन् भक्तजनलाई त्यही ढोकाबाट फर्किने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री भट्टराईले शिवरात्रिमा विगतमा हुने सबै कमीकमजोरी सच्याएर गुनासोरहित बनाउन कोषका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पशुपति जाने उनले जानकारी दिए। सरसफाई, शौचालय, खानेपानी र सुरक्षाजस्ता सबै विषयमा गहन ढंगले काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।
शिवरात्रिमा पाशुपत क्षेत्रमा मासु, मदिरा तथा धुम्रपान पूर्णरूपमा निषेधित गरिएको जानकारी दिइयो। सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदै पाँच हजार प्रहरी परिचालन गरिने डीआईजी विश्वराज पोख्रेलले बताए। फागुन ९ गतेको महाशिवरात्रि व्यवस्थित गर्न सदस्यसचिव ढकाल, कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालगायतको संयोजकत्वमा ११ वटा उपसमिति बनाइएको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ।
अदालतमा पेश हुन सलमान खानलाई आदेश